माधव-झलनाथ समूहको आज स्थायी कमिटी बैठक बस्दै ! - हाम्रो देश
माधव-झलनाथ समूहको आज स्थायी कमिटी बैठक बस्दै !
काठमाडौँ । नेकपा एमालेका झलनाथ खनाल –माधवकुमार नेपाल समूहको स्थायी कमिटी बैठक बस्दैछ । शुक्रबार बिहान ११ बजे बैठक बोलाइएको हो ।
एमालेले माधवकुमार नेपाल, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे र घनश्याम भुसाललाई ६ महिना पार्टी सदस्यताबाटै निलम्बन गरेको छ । उनीहरुले दिएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले निलम्बन गरेका हुन् । एमालेको केन्द्रीय कमिटीको चैत ७ गतेको बैठकको निर्णयअनुसार महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेपाल, रावल, पाण्डे र भुसाललाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
आफ्ना पक्षका नेताहरुमाथि एकपछि अर्को गर्दै ओलीले कारबाही गर्न थालेपछि आगामी रणनीति बनाउन र छलफल गर्न स्थायी कमिटी बैठक बोलाइएको नेपाल–खनाल पक्षले जनाएको छ ।
फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपामा आवद्ध एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पहिल्यैको अवस्थामा फर्काइदिएपछि दुवैपक्ष आ–आफ्नो कित्तामा फर्किएका छन् ।